"Ny mahamaika ny làlan'ny morontsiraka vaovao" ho an'ny nosy Réunion dia miteraka vaovao
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » "Ny mahamaika ny làlana amoron-tsiraka vaovao" ho an'ny Nosy La Réunion dia miteraka vaovao
"Ny mahamaika ny làlana amoron-tsiraka vaovao" ho an'ny Nosy La Réunion dia miteraka vaovao
5 febroary 2019, nianjera ny vato sahabo ho 500 kilao tamin'ny 3:50 hariva teo amin'ny arabe morontsiraka Réunion ka tsy nisy naratra. Ny arabe amin'ny sisin'ny tendrombohitra sy amoron-dranomasina dia nisy fiatraikany avokoa tamin'ny vato nianjera. Ny fianjeran'ny vatobe farany teo amin'ity faritra ity dia nanomboka ny taona 2009.
Mba hanadiovana ny arabe, hanatanterahana ireo asa vonjy maika, hahafahan'ny fidirana an-tsehatra ataon'ny ekipa Roads an'ny Réunion Region ary ho fepetra fisorohana dia navily lalana ny fifamoivoizana.
Ho fanampin'izay, hialana amin'ny "mode mivezivezy mihodina" hatramin'ny alahady, ny Faritra Réunion dia nanapa-kevitra ho fepetra fiarovana mba hameno tanteraka ny fanidiana ny làlana amoron-dranomasina ny Alarobia 6 feb 12h ka hatramin'ny 14 ora hanatanterahana ny fanadiovana sy ny asa fanadiovana amin'ny fanombohana faritry ny fianjeran'ny vatolampy andro. Nisy fiviliana natsangana tamin'ny lalana mankamin'ny tendrombohitra. Reunionais dia nasaina hanao ny fandaminana mifanaraka amin'izany.
Fanambarana ofisialy tamin'ny 5 Febroary izany.
“Ny LaRéunionEcolo 'dia namoaka ny Communique iray azy ireo taorian'ny fianjeran'ny vato izay nahatonga ny fanidiana ny làlambe amoron-tsiraka:
Taorian'ny fanararaotana nisy fiantraikany tamin'ny làlana amoron-tsiraka soa aman-tsara tsy nisy fahasimbana na fahavoazana, LaRéunionEcolo dia nampahatsiahy ny rehetra ny fahamoran'ny fanamboarana ny làlana amoron-tsiraka vaovao. "Andao ampiana fa tsy ny làlana ankehitriny ihany no manana vidim-bola mitohy, fa koa ny harato fiarovana ny harambato dia tsy misy endrika ekolojika (vorona mpanafika - molch-in-tail - ary zavamaniry endemika)" hoy ny kaominaly.
“Aza adino fa ny Nouvelle Route du Littoral dia manome fiheverana manokana ny fiantraikan'ny tontolo iainana. Raha ny marina, amin'ity tetik'asa midadasika ity, ny hetsika natao ho an'ny biby sy zavamaniry dia vola mitentina 80 tapitrisa Euro ary fepetra manga sy maitso 150 (ohatra ny fanarenana ny zavamaniry ho an'ireo toerana fametrahana sokatra an-dranomasina eny amoron-tsiraka andrefana, lalan'ny trozona, fiarovana solika) dia nalaina an-tsambo mba hanonerana ny fiantraikan'ny tontolo iainana eo amin'ny toerana fanamboarana. Ity fomba fiasa ity dia tsy manam-paharoa amin'ny Nosy Réunion raha amin'ny resaka fakan-kevitra amin'ireo mpandray anjara rehetra ao amin'ny faritra ”hoy ihany ny kaominaly.
Nampiasa ny kaominin'izy ireo i "LaRéunionEcolo" hangataka ny mponin'i Réunion hanokatra ny mason'izy ireo hanameloka ny fanaovana politika amin'ity tetikasa manan-danja ity.
GM vaovao natolotra an'i Fusion Resort Cam Ranh any Vietnam
Konferansa minisitra UNWTO / ICAO voalohany momba ny fizahan-tany sy ny fitaterana an'habakabaka aty Afrika